Tsidiho ny Belfast sy Dublin | Vaovao momba ny dia
Tsidiho i Belfast sy Dublin
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia niresaka momba ny fitsidihana an'i London sy Edinburgh izahay. Ahoana ny fomba fampiraisana ireo tanàna roa ireo sy izay hitsidika azy tsirairay. Ny hevitra dia ny fitsidihana ireo tanàna lehibe any amin'ny Fanjakana Mitambatra.
Anio no anjaran'ny Belfast, renivohitr'i Irlandy Avaratra, fa satria efa ao amin'ny Emerald Isle isika, ny tena mety dia ny manohy, mandao an'i UK ary mitsidika Dublin satria ireo tanàna irlandey roa dia akaiky dia akaiky ary manome antsika panorama malalaka kokoa momba ny zava-misy eto amin'ny nosy. Ahoana no ahatongavantsika avy any Edinburgh mankany Belfast, inona no hitantsika any ary ahoana no hanohizantsika ny diantsika mankany Dublin?
Izany no renivohitr'i Irlandy Avaratra ary manana tantara mifandraika amin'ny tokotanin-tsambo izy io, eto no nananganana ny Titanic, ny fanaovana tady ary ny fanodinana paraky. Tanàna nandray anjara mavitrika tamin'ny Revolisiona Indostrialy ary nanana fotoana tena ratsy nandritra ny fifandonana tamin'ny IRA sy ireo Irlandey tsy miankina.
Nandritra ny fotoana kelikely dia milamina ny raharaha ary efa nandalo karazana ny tanàna fanandratako hatsarana izay nahatonga azy io ho toerana fizahan-tany sy tsara tarehy kokoa. Ahoana no ahatongavanao any Belfast avy any Edinburgh? Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia misy ranomasina eo anelanelany, ka na inona izany na inona dia mila miampita azy ianao. A) Eny, ny fomba haingana indrindra dia amin'ny fiaramanidinaMisy sidina mora vidina izay adiny iray na latsaka. Easyjet, ohatra.
Ny làlana mahazatra na malaza indrindra dia avy hatrany amin'ny seranan-tsambo any Skanraer any Skanraer fa taona vitsy lasa izay ilay orinasa nanolotra ny tapakila mitambatra (bus + ferry), Stena Lines, dia nifindra avy tamin'ity seranana tsara toerana ity sy toerana nahatongavanao tamin'ny lamasinina , hatrany amin'ny seranan'i Kairo. Araka izany, tsy misy afa-tsy raiso ny lamasinina any Edinburgh mankany Ayr, miaraka amin'ny fifandraisana ao Glasgow, ary avy eo makà bisy mankany amin'ny seranan'i Kairo. Tokony ho adiny roa eo ho eo ny sambo.
Stena Lines dia manolotra sambo roa, ny Stena Superfast VII ary ny Stena Superfast VIII. Miampita ny ranomasina Irlandy mandritra ny adiny roa sy dimy ambin'ny folo minitra izy ireo ary misy serivisy enina isan'andro. Misy WiFi ao anaty sambo sy trano fisakafoanana. Manomboka amin'ny 4 maraina dia afaka mandeha ianao fa manandrana tonga adiny iray mialoha satria ny mpizahatany sasany dia nahita ny làlan-kalesiny nandeha aloha be noho ny ora voatondro.
Ao Belfast dia mampidina anao any amin'ny fiantsonan'ny ferry anao ary eo am-pelatananao ny tamba-jotra Translink, mampiditra bus, lamasinina ary metro, handehanana mankany afovoan'i Belfast. Raha te handray taxi ianao dia kajy ny kilao 9 kilao. Orinasa hafa dia ny P&O Irish Sea ary ny Isle of Man Steam Packet Company.
Ok izao Inona avy ireo fizahan-tany atolotry Belfast antsika? Diniho ny Titanic, Game of Thrones, fonja taloha, fiangonana, trano mimanda, zaridaina ary tranombakoka. Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana tao amin'ny sambo Belfast namboarina ny Titanic ka tsy maintsy jerena. Antsoina ilay manintona Titanic Belfast ary miala amin'ny afovoan-tanàna izy io: tranobe misy rihana enina misy galeraly sivy misy ifandraisany amin'ny sary, feo, manitra ary tantara izay mifandraika amin'ilay sambo malaza.
Rehefa vita izany dia azonao atao ny mitsidika sambo iray amin'ny vanim-potoana mitovy amin'izany, ny SS Nomadic. Tsy manisa ity fitsidihana ity ny tapakila dia mitentina £ 17 isaky ny olon-dehibe Ary raha mividy ny pass 25 pounds ianao dia manana: ny Titanic, ny SS Noamdic, ny Discovery Tour ary ny sary fahatsiarovana. Bebe kokoa? Afaka misotro dite ianao amin'ny Alahady amin'ny rendrarendra ny Titanic, ny tohatra ary ny rehetra! Ho an'ny £ 24 fanampiny.
Amin'ny toerana maro any Irlandy Avaratra, ampahany amin'ny Lalao amin'ny seza fiandrianana ary koa ao amin'ny Belfast Studios. Ny zava-drehetra dia akaiky kokoa na tsy dia akaiky loatra tsy maintsy misoratra anarana amin'ny fitsidihana ianao hahafantatra azy ireo satria misy ifandraisany amin'ny HBO ireo masoivoho. Fa afaka mitsidika ny Castle Ward izay ao anatin'ilay andiany dia Winterfell, ilay tsara tarehy Lalan'ny Mpanjaka ary maro ny toerana voajanahary.
La Fonjan'i Crumlin Road Iray amin'ireo fonja niavaka indrindra tamin'ny taonjato faha-150. Manolotra fitsangatsanganana, hetsika ary kaonseritra mitarika azy io. Nisokatra nandritra ny 70 taona izany ary maro amin'ireo revolisionera Irlandey no niaritra ny saziny teto. Maharitra 26 minitra ny fitsidihana ary misokatra isan'andro ilay tranonkala mandritra ny taona mandra-pahatongan'ny Krismasy, 9 Desambra ary Taom-baovao. XNUMX kilao isaky ny olon-dehibe ny vidiny.
Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Katedraly Belfast, ny Fiangonan'i Santa Ana, Anglikanina ary Irlandy, tempolin'i Romanesque iray misy tohatra sy andry, varavarankely lava ary mozika mahafinaritra. Ny fitsidihana dia mitentina 5 pounds sy 6 raha manofa ilay audio audio ianao. ny Trano Belfast Izy io dia tranobe kokoa noho ny tranon'ny medieval ary ny zavatra tsara dia ny manakaiky ny Cave Hill izy io ary ny fahitana ny tanàna sy ny farihy dia tsara sy tena tsara.
Havoana zohy Antsoina hoe izy io satria manana lava-bato dimy amin'ny harambato ary tamin'ny alalany no nandalo ny ampahany tsara amin'ny tantaran'ny tanàna. Misy zaridaina misy toerana arkeolojika, làlambe, zaridaina, ala ary trano fisakafoanana. Trano malaza hafa ao an-tanàna ny Lapan'ny tanàna Belfast, taloha, hita ao amin'ny Kianja Donegall. Maimaimpoana ny fitsidihanao ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady amin'ny 11 maraina, 12 sy 3 hariva ary amin'ny faran'ny herinandro amin'ny mitataovovonana sy amin'ny 2 sy 3 hariva.
Mandritra ny roa andro ao Belfast dia ampy izay. Angamba raha misoratra anarana amin'ny fitsangatsanganana manodidina azy ianao dia tokony ho telo andro na mihoatra (raha mitsidika an'i Kilkenny, Newgrange, Trim, Wicklow, Howth) ianao, dia avy eo tonga ny fotoana hirosoana mankany Dublin.
Ny dia avy any Belfast mankany Dublin dia maharitra adiny roa ary afaka atao amin'ny bus na lamasinina. Ny lalam-by dia manana làlana mahafinaritra kokoa ary manana serivisy manomboka amin'ny enina maraina ianao. Ny vidiny dia eo anelanelan'ny 20 sy 24 euro, mihoatra na latsaka. Mampidina anao any amin'ny Station Connolly ao Dublin izy ireo, miorina afovoany ary miala ao Belfast Central. Manisa kajy matetika amin'ny fiaran-dalamby iray isaky ny adiny roa ary raha efa manana drafitra ny dia ianao dia tsara ny mividy azy ireo an-tserasera satria mora vidy kokoa noho ny mividy azy ireo amin'ny andro iray izy ireo.
Afaka mandray bus koa ianao, matetika ny serivisy ary mora kokoa izy io. Miorina tsara ny gara bus Belfast, eo afovoany, ary tsara tarehy koa ny toerana. Ny marina dia tanàna tsara tarehy sy maro loko kokoa i Dublin noho i Belfast ary ho tianao avy hatrany izany.
Avelako eto ianao ny sasany amin'ireo fizahan-tany fizahan'i Dublin:
Trano fivarotana Guiness: ny fitsidihana ny labiera dia kilasika izay mifarana foana amin'ny bara iray, ny Gravity, izay ahitanao ny tanàna tsara indrindra.
Bokin'i Kells: Ity boky ity dia nosoratana manodidina ny taona 800 am.fan.ir. ary izy dia pejy 680 tsara tarehy nohazavaina miaraka amin'ireo soratra ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Trinity College izy io.
National Gallery of Ireland. Izy io dia tranokala tsara tarehy misy sary hosodoko sy hosodoko 2500 mahery, sary, sary ary sary sokitra. Misy mpanakanto malaza toa an'i Monet, Van Gogh na Picasso.
Katedraly Saint Patrick: Natsangana tamin'ny taonjato faha-700 izy io ary iray amin'ireo trano kely antenantenan'ny tanàna. Misy fasana XNUMX eo ho eo ao, anisan'izany ny an'ny mpanoratra an'i Ny dia nataon'i Gulliver, Jonathan Swift.
National Museum of Ireland. Izy io dia tranombakoka arkeolojia izay ahafahanao mahafantatra ny tantaran'ny nosy hatramin'ny vanim-potoana talohan'ny tantara, tamin'ny alàlan'ny fanafihana Viking ka mandraka ankehitriny.
Fonja Kilmainham: Tranomaizina taloha ao an-tanàna izy io ary misy tantara mampientanentana sy maizina. Mendrika ny hanaovana ilay fitsidihana mitarika.
Jamesist Distillery taloha. Tianao ve ny whisky? Ity no fitsidihana tsara indrindra ho an'ny rehetra tamin'izany.
Fivarotamboky Chester Beatty.
Amin'ireto toerana itodiana ireto dia ampio ny fitsangatsanganana amin'ny fitsangatsanganana an-tsambo, izay azo atambatra amin'ny fiara fitondra amfibia be, sy ny fitsidihana alikaola Temple Bar, ny faritry ny trano fisotroana irish mikorontana indrindra any Eropa. Telo andro any Dublin no tsara fa raha mbola mijanona ela kokoa amin'ny toerana itodiana ianao, tsara kokoa. Ho afaka hanao fitsangatsanganana bebe kokoa ianao na hamporisika ny tenanao handamina dia lavitra kokoa.
Izay alehanao rehetra ao amin'ny Nosy Emerald, avaratra na atsimo, dia hanolotra anao tontolo mahafinaritra, tantara ary kolontsaina mahafinaritra izay sarotra hadinoina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » firenena » United Kingdom » Tsidiho i Belfast sy Dublin